Mbola miasa na dia tafihana, samborina sy endahina aza ny gazety pro-demaokraty Apple Daily · Global Voices teny Malagasy
'Tsy misy ny safidy afa-tsy ny mitozo'
Voadika ny 10 Aogositra 2021 10:18 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, English, English
Sarikpika: fonon'ny pejy Apple Daily tamin'ny 18 Jona. Candice Chau/HKFP.
Ny lahatsoratra manaraka etoana dia ango-tatitra nosoratan'i Kelly Ho sy i Candice Chau izay nivoaka tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 17 sy 18 jona 2021. Nozaraina teto amin'ny Global Voices izany araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Mbola nanohy ny asany ary namita printy kopia 500.000 ihany ilay gazety mpanaitaitra mivoaka isan'andro sady manohana ny demaokrasia avy ao Hong Kong antsoina hoe Apple Daily tamin'ny 18 jona taorian'ny nanafihan'ny polisin'i Hong Kong ny foiben-toerany sy nisamborana ireo mpitantana ambony miisa dimy tao aminy noho ny ahiahy “fanomanana teti-dratsy ifandraisana tendro amin'ny hery vahiny”.
Noraofina nandritra izany fanafihana izany ny kapika mafonjan'ny solosaina miisa 44 ahitana votoaty fanoratan-gazety ary nohazonina ny anto-bola miasa mitentina 18 tapitrisa dôlara HK (eo ho eo amin'ny 2,32 tapitrisa dôlara amerikana).
Ny lazaina ho fanitsakitsahana dia lahatsoratra amin'ny teny shinoa sy anglisy manodidina ny 30 tao amin'ny Apple Daily navoaka hatramin'ny taona 2019 niantso ny hanasaziana an'i Shina na i Hong Kong.
Nanaovan'ny polisin'i Hong KOng bemidina ny Apple Daily, nosamborina araka ny lalànan'ny filaminam-pirenena ny mpitantana.
Nandritra ny valandresaka ho an'ny gazety tamin'ny 17 jona, nampangain'ny lehiben'ny filaminana ao Hong Kong, Atoa John Lee, ny Apple Daily ho mampiasa ny fanaovan-gazety ho fitaovana handrahonana ny filaminam-pirenena ary nampitandremany ireo mpanora-gazety hakakombom-bava amin'ny fisamborana ireo mpitantana miisa dimy na raha tsy izany dia handoa “sara tsy ho zaka”
Saingy mbola nanohy tamin'ny nanaovana ny iraka ampanaovina azy ihany ny mpanangom-baovaon'ny gazety sy ny ekipa (mpiasa). Mihoatra ny 500.000 ny kopian'ny Apple Daily News natao printy sy navoaka teny amin'ny talantalan'ny vaovao ny ampitso.
Ireo mpitantana miisa dimy nosamborina ireo dia ny Lehiben'ny mpanatanteraka (PDG) ankihihihihy Cheung Kim-hung, ny Lehiben'ny Fanatontosana asa Royston Chow, ny Tonian'ny Fanoratana ao amin'ny Apple Daily Ryan Law, ny Mpiara-miasa amin'ny Famoahana Chan Pui-man, ary i Cheung Chi-wai, izay mandrindra ny seha-baovao anjotran'ny gazety.
Nampangain'ny polisy amin'ny fomba ofisialy i Cheung Kim-hung sy i Ryan Law ho mifandray tendro amin'ny singa avy any ivelany tamin'ny 18 Jona, ary hiatrika fitsarana ireo roa ireo ny 19 jona. Mbola nohazonina hatrany tamin'ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy ny telo hafa.
Tamin'ny valandresaka natao taorian'ny bemisina tamin'ny 17 Jona, niteny ny lehiben'ny filaminana tao Hong Kong John Lee hoe :
Nosamborina ireo noahiahiana noho ny porofo mavesatra fa miray tsikombakomba izy ireo handrahonana ny filaminam-pirenena.
[…] izay rehetra na orinasa mitady hampiasa ny asa fanaovan-gazety ho elo fiarovana na hanaronana heloka bevava mandrahona ny filaminam-pirenena, handraisan'ny governemanta SAR fepetra henjana indrindra ny fiadiana amin'izy ireny araka ny lalàna. […] Hafa ny mpanora-gazety tsotra, ary tsy tokony hiaraka amin'izy ireny, alaviro ireny olona ireny.
Eto aho milaza ampahibemaso fa: aza miaraka amin'ireny jiolahy mandrahona ny filaminam-pirenena ireny, hizaka ny mavesatra ianareo raha miara-mijoro amin'ireny jiolahy ireny, tokony hotapahinareo ny fifandraisana amin'ireny jiolahy ireny mba tsy ho tara loatra ny fibebahana.
Tsy nety namaly kosa anefa i Lee amin'ireo fanontaniana hoe mandika lalàna ve ny fitohizan'ny asan'ny Apple Daily, ny karazan-dahatsoratra, na afa-mizara ara-dalàna ny lahatsoratra ve ny olompirenena, mividy ny gazety na mandoa vola amin'ireo zara ao amin'ny rafi-pandaminana (organisation).
Nanaovan'ny polisin'ny Hong kong bemidina voalohany ny Apple Daily tamin'ny Aogositra 2020 rehefa nosamborina ho nanao hosoka tamin'ny fifandirana ara-barotra tamin'olon-kafa i Jimmy Lai mpanorina azy. Volana vitsy taorian'izany, tamin'ny Desambra 2020, nampian'ny polisin'ny filaminam-pirenena ny vesatra “firaisan-tendro amin'ny governemanta vahiny” noho ny lalànan'ny Filaminam-pirenena ao Hong Kong. Amin'izao fotoana izao moa ity oloben'ny fampitam-baovao 73 taona ity mamita ny figadrana am-ponja 20 volana noho ny fandikan-dalàna mifandraika amin'ny hetsi-panoherana.
Nanazava ny mpiara-miasa amin'ny gazety eo amin'ny famoahana, Chan Pui-man, nandritra ny antsafa iray mialoha ny nisamborana azy fa nikiry ny hanodina ny gazety ny ekipa na dia efa tsinjon-dry zareo aza ny fiafarana mampahonena mety hihatra aminy noho ny tsindry ataon'ny governemanta:
Antsafa | Chan Pui-man mpiara-miasa amin'ny famoahana nialoha ny fisamborana: mety mbola ho tafajoro ve ny Apple Daily no elefanta tao an'efitra ho an'ny ekipa rehetra… “saingy tsy misy ny safidy ho anay afa-tsy ny manatonta hatramin'ny farany… Tsy misy safidy”.
Ny fanambaràna nataon'ny gazety taorian'ny fisamborana ny dimy amin'ireo mpitantana ambony ao aminy ihany koa dia nivoady ny hitozo hatrany amin'ny fanatontosana ny adidiny hatramin'ny farany.
Taorian'ny bemisina nataon'ny polisy, nisy ireo mpanora-gazetin'ny Apple Daily niverina tao amin'ny biraony ary nanao ny asany tamin'ny alalan'ny solosainany manokana na tamin'ny alalan'ny fitaovana finday. Tonga tany amin'ny fanaovana printy ny endrika farany tamin'ny 11:30 pm. Nasongadin'i Phoebe Kong, masoivohon'ny vaovao DW, tamin'ny sioka iray ny pejy voalohany tamin'ny gazety:
Ny fomba tsara indrindra hiarovana ny fahalalahan'ny gazety dia ny mandranty.
‘MILA MANOPY MASO NY REHETRA’ – tsonga avy amin'ilay PDG Cheung Kim-hung napetraka teo afovoan'ny pejy voalohany amin'ny gazety Apple Daily HK androany. Eto haka ny jery voalohany amin'ilay gazety mpitsikera taoriana kely ny bemidina goavana.
Ho fanehoana fanohanana ny Apple Daily, nirohotra nividy ny gazety ireo Hongkongers mpanohana ny demaokrasia taorian'ny misasakalina:
HKFP_mivantana: milahatra ny olona hividy ilay mpanaitaitra prô-demaokrasia Apple Daily taorian'ny nanafihan'ny polisy ny foibeny.